Musharax Madaxweyne Oo Baaris Caalami Ah Ku Socoto
Saturday August 13, 2016 - 19:57:27 in Wararka by Xafiiska Muqdisho
Mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah Madaxa CRD ayaa waxaa la sheegayaa inay baaris caalami ah ku socoto ka dib markii shaqaale hore iyo kuwa hadda ee hay'ada CRD ay waresysiyo siiyeen baarayaal caalami ah oo daba socda 10kii sane ee u danbeys
Mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah Madaxa CRD ayaa waxaa la sheegayaa inay baaris caalami ah ku socoto ka dib markii shaqaale hore iyo kuwa hadda ee hay'ada CRD ay waresysiyo siiyeen baarayaal caalami ah oo daba socda 10kii sane ee u danbeysey iyo sida CRD ay u maamushay dhaqaalihii caalamku ugu deeqay.
Baarista ayaa lagu sheegay in 15 milyan oo doolar ah aan la helin xisaab xirkooda, isla markaasna la sheegay in Madaxa CRD uu guri weyn uu ka iibsaday dalka Kanada oo ku baxday lacag gaareysa 850 kun.
Dee haddana uuba degey guri qaali ah ee ku yaalla aga-gaarka Tiyaatarka Qaranka oo ay weliba ilaaliyaan illaalada Madaxtooyada, doonahayana inuu musharax noqdo isagoo shaqaalaha CRD u diiday inuu xil wareejiyo.
Baarista ku socota Jabriil ayaa waxaa ka mid ah musuqmaasuq, xisaab xir la'aan, u hogaansami la'aan nidaamka xisaabxirka caalamka iyo dacwado ay gudbiyeen haween horey uga shaqeyn jirtey CRD oo ay ku eedeeyeen xadgudub iyo damac xubnahooda ah.
Haweenkaas la wareystay ayaa waxaa ka mid ah Faadumo Cabdullaahi Xaaji oo ah Qurbojoog ka timid dalka Mareykanka gaar ahaan Ohio State oo 8 sano ka hor la shaqeysay Jibriil oo ka duubtay cod iyo video qarsoon.
Sidoo kale Caasho Axmed Xaaji oo eedeymo culus u gudbisay baarayaasha.
Bacdamaa NGP-yada ay helaan dhaqaale badan ayaa lagu soo waramayaa in Jibriil uu xitaa suurtogelin waayey inuu horumariyo hay'ada CRD oo dhigeeda Puntland iyo Somaliland ay dhaqaalihii ku bixiyeen sidii ay xrumo casri ah ugu dhisi lahaayeen, halka CRD ay weli degentahay guri kiro ah oo uu Madaxii hore kireeyey oo weli la'aaminsanyahay in Cabdulqaadir Yaxye haddii uu noolaan lahaa in CRD ay ku tallaabsan laheyd horumar ballaaran.
Intaas waxaa sii dheer sida uu shaqaalaha ula dhaqmo Jibriil oo dhammaan intii la wareystay oo ay ka mid yihiin Axmed Nuur, Rooble, Axmed, Xasan,iyo kuwo kale oo magacooda qariyey.
Baaristaan ayaa ah mid cusub oo ka jawaabeysa eedeymo fara badan oo hay'adaha NGO-yada la xiriirta bacdamaa ay intooda badan maamulaan shaqsiyaad loo bixiyey kuwo laptop ku wata mashruuca oo kaligood un socda, kana qeybgala shirarka caalamiga ah.
Eedeymaha sababta CRD culeyska loo saaray ayaa waxaa ka mid ah in shaqaalihii ay diyaar u noqdeen inay ka hadlaan dhibaatada ay la kulmeen.
Waxaaba lala yaabay markii ay cabashooyinka ay ku soo biireen fannaaniintii Waaberi oo intooda badan sheegay inuu Jibriil ku shaqeystay oo uu istuudiyo yar sameeyey ka dibna ay muddo lix bilood ah sameynayeen barnaamijyo uu lacago badan ku helay, hase ahaatee uusan waxba ka siinin fannaaniintii mudadaas dadaalayey oo mashuurca u soo dhiciyey.
Madaxa hay'ada CRD ayaa in muddo ah diidanaa Madaxweyne Xasan Sheekh oo uu u arkayey shaqsi isaga la soo shaqeeyey oo uu madax u ahaa, doonahayena inuu gacantiisa midig noqdo, hase yeeshee markii Madaxweynaha oo si wanaagsan u garanahayey Jibriil uu muraayadaha ka dalcday, deetana keentay in Jibriil uu xumaanta Madaxweynaha ka shaqeynayey muddo 3sano ah oo uu goob walba oo uu tago si gaar ah u tabinayey ceebaha iyo qaladaadka dowladda.
Madaxa Jibriil weligiis xil dowladeed ma uusan soo marin, kumana wanaagsan wadashaqeynta oo hay'ada CRD ayuu u maamulayey si kaligii talis ah oo uu weliba si xun oo aan la arag uu ula dhaqmay.
Caasha oo ku sugan Hargeisa ayaa sheegtay inay mudo la yaabaneyd oo eedeymahan ay aheyd inay soo baxaan 5 sano ka hor.